चौथो स्टेजको क्यान्सरसँग जुधिरहेका ५ वर्षका छोराले आमालाई सोधे, ममी हामी घर कहिले फर्किने ? गीताको थामिएन आँशु - Samachar Post Dainik
काठमाडौँ । बन्दिथ जम्मा ५ वर्षका भए । उनलाई क्यान्सर भएको थाहा छैन ।
सन् २०२० को नोभेम्बरदेखि अस्पताल भर्ना भएका छोराले गम्भिर प्रकृतिको क्यान्सरसँग जुधेको टुलुटुलु हेरेकी आमा गिताले सम्झिइन्की भक्कानिन थाल्छिन् । गिताका आँखामा शाँसु भरिएको धेरै भयो ।
आमाका आँशु हेर्दै छोरा बन्दिथले भन्छन् ममी हामी घर फर्किने कहिले हो ?
भारतको यो परिवार अहिले ठूलो समस्यामा परेको छ । एक मात्र छोरालाई चौथो चरणको क्यान्सबाट गुज्रीरहँदा आमा गिताले अब सर्वसाधारणले सहयोग गरेको खण्डमा मात्रै आफ्नो छोराले पुर्नजीवन पाउने भन्दै भक्कानिइन् ।
बन्दिथको उपचारका लागि कम्तिमा पनि २५ लाख लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
नेपालमा कसैको छोरा या छोरिले बिदेशमा पढ्छ वा अध्ययन गर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो बिद्यार्थी र परिवारकै रवाफ अलग्गै देखिन्छ ।
तर नेपालमै नेपाली बिद्यार्थीलाई पढाउन बिदेशबाट नै शिक्षिका नेपाल आउछन् त्यो पनि एक गाउको सरकारि बिद्यालयमा र स्वयंसेवक शिक्षर र शिक्षिकाको रुपमा आफ्नो काम निर्वाह गर्छन्।
बाग्लुङ बढिगाढ गाउपालिका वडा नं ५ पौदिटारि आधारभूत बिद्यालयमा गएको दुई महिनादेखि बिदेशि शिक्षिकाहरुले अध्यापन गराइरहेका छन् ।बिदेशि एक संस्थाले पाच बर्षसम्म लगातार त्यश बिद्यालयमा निशुल्क शिक्षक शिक्षिकाहरु उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
बिदेशबाट यसरी आउने शिक्षिकाहरु एकबर्षसम्म पढाउछन् र आफ्नो काम सकिसकेपछि फेरि उनिहरु आफ्नै देश फर्किन्छन् र फेरि अरु शिक्षक शिक्षिकाहरु नेपाल आउदछन् ।यसरी बिदेशि नागरिकहरुले बिद्यालयमा पढाउदाखेरि बिद्यार्थी र सम्पूर्ण अबिभावकहरु पनि एकदमै खुसि र उत्साहित हुने गरेका छन् ।
नेपाली भुमिमा आएर बिदेशि नागरिकले यसरी पढाउनु र स्पष्ट नेपाली भाषा बोल्न जान्नु र नेपाली संस्कृतिलाई अन्तरास्ट्रिय स्तरमा चिर परिचित गराउनु देशकै लागि पनि एकदमै सकारात्मक बिषय हो ।
आजको यश शृङ्खलामा तिनै बिदेशि शिक्षिका ,बिद्यार्थी र अभिभावकसग लिइएको अन्तर्बार्ता तपाइहरु समक्ष पेश गर्दछौ ।
प्रकाशित मिति २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १३:०३